दुई वर्षमा निर्माण गरिसक्ने भनेकाे पुल ९ वर्ष लाग्याे, त्याे पनि ढलान गर्दागर्दै भत्कियो » लोक संगीत पारखी
दुई वर्षमा निर्माण गरिसक्ने भनेकाे पुल ९ वर्ष लाग्याे, त्याे पनि ढलान गर्दागर्दै भत्कियो
२३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:५७
झापा । मेचीनगर नगरपालिका–१२ स्थित हँडिया खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल ढलान गर्दागर्दै भत्किएको छ । दुई वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ०६७ मा सुरु भएको पुल नौ वर्ष धकेलिँदासमेत ढलानकै क्रममा भत्किएको हो । ठेकेदारले गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको र अनुगमनमा खटिएका सरकारी प्राविधिकले छुट दिँदा पुल नबन्दै भत्किएको स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीयसमेत रहेका सुपरभाइजर खगेन्द्र विष्टले आइतबार साँझ ढलानका क्रममा ‘रेडी मिक्स्चर’ले मसला खन्याउँदै गर्दा ‘फ्रेमिङ’ भत्किएको बताए । तर, पुलको पिलरमा समेत बाहिरैबाट फलाम देखिएकाले गुणस्तरहीन काम भएको स्थानीय बताउँछन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
आज तराइमा भारी वर्षा हुने सम्भावना, सावधानी अपनाउन आग्रह
मोदिको स्वागत को लागी बनाइएको स्वागतद्धार नै ढल्यो !
SEE मा ‘बि प्लस’ आएपछि बधाई दिनेको ओइरो, लड्डु बाड्दै थाकिन नायिका करिश्मा (भिडियो)
प्रेमिकाको घाँटी रेटेर हत्या गर्ने यूवक पक्राउ (भिडियो)
सक्दो सहयोग गरौ - श्रीमान कतारमा, श्रीमती छोरो लिएर बेपत्ता (खोजिदिन परिवारको अपिल)
माया त यस्तो होस् कृष्ण र रुपाको जस्तो
संसारकै खुशी मान्छे,कसरी हुन सकिन्छ खुसी ?
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः यस्ता यस्ता सम्झौता हुँदैछन । (पुरा पढ्नुहोस)